नेइमारलाई क्लब छोड्ने विषयमा सर्त
पेरिस, १३ माघ : यही सिजन विश्व कीर्तिमानी मूल्यमा बार्सिलोनाबाट पेरिस सेन्ट–जर्मेन (पिएसजी) गएका ब्राजिलियन स्टार नेइमारलाई क्लब छोड्ने विषयमा सर्त आएको छ। पिएसजीका अध्यक्ष नासिर
इटहरी, १२ माघ : यहाँ जारी मदन भण्डारी मेमोरिय इटहरी अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण गोल्डकपको उपाधिका लागि शनिबार चिरपरिचित प्रतिद्वन्द्वी थ्रीस्टार र मनाङ मस्र्याङदी क्लब भिड्ने भएका छन् । यहाँ आज आयोजित
अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषदको टोली शनिबार नेपाल आउँदै
काठमाडौं, १२ माघ । नेपाली क्रिकेटको विवाद समाधानको प्रयास गर्न अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद (आईसीसी)को टोली भोलि (शनिबार) नेपाल आउँदैछ । आईसीसीका कार्यवाहक प्रमुख ईमरान ख्वाजा नेतृत्वको टोलीले आईतबार सल्लाहकार समितिसँग
बार्सिलोना स्पेनिस किङ्स कपको सेमीफाईनलमा
काठमाडौं, १२ माघ । इस्पानियोललाई हराउँदै बार्सिलोना स्पेनिस किङ्स कप फुटबलको सेमीफाईनलमा प्रवेश गरेको छ । गएराति भएको क्वाटरफाईनल दोस्रो लेगको खेलमा २–० ले विजयी भएको बार्साले पहिलो लेगमा भोगेको १–०
बागलुङ, ११ माघ ९रासस । यहाँ हुने ४ नं प्रदेश स्तरीय ‘मेयर कप फुटबल प्रतियोगिता–२०७४’ को तयारी तीव्र पारिएको छ । बागलुङ नगरपालिकाको आयोजनामा हुने प्रतियोगिता यही माघ १६ देखि
रियाल मड्रिड कोपा डेल रे फुटबलको क्वाटरफाइनलबाटै बाहिरियो
काठमाडौं, ११ माघ । उपाधि दावेदार रियाल मड्रिड स्पेनिस कोपा डेल रे फुटबल प्रतियोगिताको क्वाटरफाइनलबाटै बाहिरिएको छ । गएराति आफ्नै मैदानमा खेलेको रियाल मड्रिडलाई लेगानेजले २–१ ले हरायो । लेगानेजलाई
चेल्सीलाई हराउँदै आर्सनल फाइनलमा प्रवेश
काठमाडौं, ११ माघ । चेल्सीलाई हराउँदै आर्सनल लिग कप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ ।गएराति आर्सनलको मैदानमा भएको सेमिफाईनल दोस्रो लेगको खेलमा घरेलु टोली २–१ ले विजयी भयो । पहिलो
मदन भण्डारी मेमोरियल इटहरी गोल्डकप : थ्रीस्टार फाइनलमा
इटहरी, १० माघ : थ्रीस्टार क्लब इटहरीमा जारी मदन भण्डारी मेमोरियल इटहरी गोल्डकप फुटबलको फाइनल प्रवेश गरेको छ । आज भएको सेमिफाइनल खेलमा निर्धारित समयमा दुवै टिमले १–१ गोलको बराबरी
काठमाडौँ, १० माघ । दोस्रो संस्करणको धनगढी प्रिमियर लिग डिपीएल क्रिकेट प्रतियोगितामा सहभागी टोलीले आफ्नो टोलीको रणनीतिक खेलाडीको घोषणा गरेको छ । धनगढी क्रिकेट एकेडेमीद्वारा आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा
प्रधानमन्त्री देउवाद्धारा स्काउट संरक्षकको दीक्षा ग्रहण
काठमाडौं, १० माघ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्काउट दीक्षा ग्रहण गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बुधबार आयोजित एक समारोहकाबीच प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाल स्काउटको संरक्षकको दीक्षा लिएका हुन् । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री
म्यान्चेस्टर सिटी इङ्गलिस लिग कप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश
काठमाडौं, १० माघ। ब्रिस्टोल सिटीलाई हराउँदै म्यान्चेस्टर सिटी इङ्गलिस लिग कप फुटबलको फाईनलमा प्रवेश गरेको छ । ई.एफ.एल कप वा काराबाओ कप पनि भनिने प्रतियोगिताको सेमीफाईनल दोस्रो लेगको खेलमा म्यान्चेस्टर सिटी
आहा रारा गोल्डकप आजदेखि, प्रथम र द्वितीय पुरस्कारको राशी बृद्धि
९ माघ, पोखरा । पोखरामा हरेक वर्ष संचालन हुँदै आएको प्रतिष्ठित आहा ! रारा गोल्डकप फुटवल प्रतियोगिता आजदेखि शुरु हुँदैछ । १६ औं संस्करणको आहा ! रारा गोल्डकप फुटवल प्रतियोगिता